लम्जुङमा दुर्घटना रोक्न राखिएका ऐना नै असुरक्षित - TilichoNews
लम्जुङमा दुर्घटना रोक्न राखिएका ऐना नै असुरक्षित
डुम्रे वेसिशहर सडक फराकिलो बनाउने योजना एमालेले सुरु गराएको हो- उपमहासचिव गुरुङ
नेकपा एमाले का उपमहासचिव तथा गण्डकी प्रदेशका प्रथम मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले डुम्रे वेसिशहर सडक फराकिलो बनाउने योजना नेकपा एमाले को रहेको जनाउनु भएको छ ।
तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल को पाला मा उक्त योजना लाई ५ अरब ६८ करोड रुपैया विनियोजन गरिएको थियो ।
कस्तो हुनेछ डुम्रे वेसिशहर सडक ?
– सडकको मापदण्ड दायाँबायाँ ‘राइटअफ वे’ सहित १५/१५ मिटरको हुनेछ ।
– अधिग्रहण गरेकोमध्ये चौडाइ ११ मिटरमा सडक संरचना बन्नेछ ।
– सडकमा ‘अस्फाल्ट’ किसिमको कालोपत्र हुनेछ । कालोपत्र सकिएपछि रोड फर्निचर (पेन्टिङ) गर्ने र किलोमिटर पोस्ट राखिने
डुम्रे वेसिशहर सडक को ईतिहास ?
तनहुँको डुम्रेबाट २०२९ मा खन्न सुरु गरिएको सडक बेंसीसहरको ४२ किलोमिटरसम्म पुर्‍याउन साढे एक दशक लागेको थियो । २०४६ मा ट्र्याक खुलेकामा २०५२ देखि सिंगल लेनको कालोपत्र थालिएको थियो । ४ वर्षमा ४२ किलोमिटर सडकको कालोपत्र भएपछि तत्कालीन निर्माण तथा यातायातमन्त्री ओमकार श्रेष्ठले उद्घाटन गरेका थिए ।
उक्त सडक निर्माणयता स्तरोन्नति हुन नसकेको जिल्ला विकास समितिका पूर्वसभापतिसमेत रहेका पूर्वसांसद जमिन्द्रमान घलेले बताए । त्यतिबेला सडक निर्माणको जिम्मा हालका राप्रपा नेता विक्रम पाण्डेले लिएका थिए । उनको कालिका कन्स्ट्रक्सनले पाउँदीदेखि बेंसीसहरसम्मको सडक निर्माण गरेको थियो । डुम्रेदेखि पाउँदीसम्मको सडक शर्मा एण्ड कम्पनी कन्स्ट्रक्सनले गरेको थियो ।
डुम्रे बजारबाट २२० मिटरदेखि आठ दशमलव तीन किलोमिटर चाम्बाससम्म पहिलो चरणमा दुई लेन सडक बनाउन थालिएको हो । सडकका लागि भ्याट र पीएस बाहेक रु ७५ करोड ९४ लाख ९७ हजार लागत अनुमान गरिएकामा उक्त जेभीले रु ३८ करोड नौ लाख ८६ हजारमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
अहिले सडकको चौडाइ पुर्‍याउन कटिङ गर्ने, टेवा (पर्खाल) उठाउने, नाली बनाउनेलगायत काम भइरहेको छ भने डुम्रे–बेंसीसहर–चामे सडक योजना प्रमुख इन्जिनियर अच्युतविलास पन्तका अनुसार २ लेनको सडक निर्माण कार्य ३० महिनामा सक्ने गरी सम्झौता भएको छ ।
पहिलो चरणको निर्माण सकिए लगत्तै सडकको अन्य कामसमेत अघि बढाइने बताइएको छ ।
बेंसीशहर नगरभित्रका विपन्नको घरको छाना फेरिए
लम्जुङ सदरमुकाम बेँसीशहरका सडक जीर्ण